अक्टोबर महिनालाई क्यान्सर अवेयरनेस महिनाको रुपमा लिइन्छ । क्यान्सरको जोखिम कम गर्न अक्टोबर महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम र जागरण अभियान चलाइयो । सोही असरमा एक–एक पाइला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रले आस्मान सँग मिलेर स्तन तथा गर्भाशयको क्यान्सर स्क्रिनिङसम्बन्धी १ दिने स्वास्थ्य शिविर आयोजना ग¥यो । कार्यक्रममा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सपना वैद्य मल्ल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ रश्मी पुन तथा ब्रेस्ट अंको सर्जन डा. ज्योति रायमाझीले बिरामी जाँच तथा परामर्श गरेका थिए । शिविरमा स्तन तथा गर्भाशयको क्यान्सरबारे निःशुल्क परामर्श, भिडियो एक्सरे र सहुलियत दरमा ल्याब परीक्षण औषधि उपलब्ध गराइएको थियो । यो कार्यक्रमले केही हदसम्म भएपनि महिलालाई क्यान्सर रोग लाग्न नदिन फाइदा पुगेको ब्रेस्ट अंको सर्जन डा. ज्योति रायमाझीले बताइन् । विश्वमा महिलामा हुने क्यान्सरमा स्तन क्यान्सर पहिलो नम्बरमा छ भने नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरपछि यो दोस्रो नम्बरमा आउँछ ।स्तन क्यान्सर २० वर्ष माथिका महिलालाई हुन सक्ने भएकाले २० वर्ष कटेकाहरुले घरमै सेल्फ इक्जामिनेसन विधि अपनाउनु आवश्यक छ । महिनावारी भएको ५ देखि ७ दिनपछि आफ्नो स्तन र काँखीमुनी आफैंले छामेर अनावश्यक गाँठागुँठी भए नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । समयमै पत्ता लागेर उपचार भएमा क्यान्सर रोग निको हुन्छ ।
नारी संवाददाता , कार्तिक १७, २०७८
एउटा छोकडाबाट २३ क्यालोरी पाउन सकिन्छ । नियमित रूपमा छोकडा खाए शरीरमा रगतको मात्रा कमी हुँदैन ।
कफीमा भएको ‘एन्टिअक्सिडेनट’ ले मानसिक तनाव कम गर्छ । यसले तनाव कम गर्ने ‘फ्रि–रेडिकल्स’लाई नाश गर्छ ।
मीरा शाह, आश्विन ७, २०७८
खानाद्वारा शरीर, दिमाग र मनलाई निरोगी कसरी राख्ने भन्ने कुरा नै ‘फुड कोचिङ’ को मुख्य सूत्र हो ।
राजेश घिमिरे, आश्विन ४, २०७८
अरू अन्नको तुलनामा ओट्समा क्यालोरी बढी पाइन्छ । चिसो मौसममा यो खान बढी उपयुक्त मानिन्छ ।
सुशीला शर्मा, भाद्र ७, २०७८
खाद्यान्नको उचित छनोटसँगै सरसफाइ तथा स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
नारी संवाददाता , श्रावण ११, २०७८
गर्भलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्दै, गर्भ सम्बन्धी योजना, अनिच्छित गर्भ व्यवस्थापन, गर्भको स्याहार, प्रसव तथा सुत्केरी स्याहार र नवजात शिशुको समेत स्याहार गर्न आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी दिने ‘आमा’ स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तिका बजारमा आएको छ ।
नारी संवाददाता , वैशाख १६, २०७८
‘आखिर किन हो, तिमी त्यसै पनि झर्किरहने ? केही भएको छैन, त्यसै सानातिना कुरामा पनि आवेशमा आइरहन्छ्यौ । सबै कुरा पु¥याइदिएकै छु त तिमीलाई, तिमीले पनि आफ्नो नोकरी गरेकै छौ । घरमा कुनै समस्या छैन, केटाकेटीले राम्रै विश्वविद्यालयमा पढेका छन् । आमाबुवा उमेर पुगेका भए पनि समझदार हुनुहुन्छ । तिम्रो यो चिड्चिडाहटले आजकल मलाई दिक्क बनाएको छ ।’
जाडो मौसममा वा चिसो बढेको समयमा बाथरोगीको समस्या अलिक बढ्छ । यस्तो समयमा बाथरोगीले प्रायः जोर्नी दुखाइ बढेको महसुस गर्छन् । चिसोमा प्रायः बिहानीपख जोर्नी बढी सुन्निने, अररो हुने, दुख्ने र मुठ्ठी कस्न गाह्रो हुन्छ ।
नारी संवाददाता , मंसिर २६, २०७७
सुपाच्य खानेकुरा तथा सादा खाने कुरामा जोड दिनु राम्रो हो । खानेकुरा हतार नगरी राम्ररी चपाएर खानुपर्छ । साथसाथै बिस्तारै चपाएर खाना सेवन गर्दा ओभर डाइटिङबाट बचिन्छ । किनभने लामो समय लगाएर खाना खाँदा हतारमा खाएजस्तो धेरै मात्रामा खानेकुरा खाइँदैन ।
सुजाता मुखिया, चैत्र २७, २०७६